Dilka dad Ethiopian ah oo lala xiriirinayo Al Shabaab. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Dilka dad Ethiopian ah oo lala xiriirinayo Al Shabaab. Saraakiisha booliska dowladda Koofur Africa ayaa sheegay in baaritaanno ay sameeyeen kaddib ay ku ogaadeen in Al Shabaab Magaaladaasi ay ku dileen dad kasoo jeeda dalka Ethiopia oo ku sugnaa gudaha dalkaasi.
Booliska ayaa sheegaya in 14-Muwaadin oo u dhalatay dalka Ethiopia rag ka tirsan Al Shabaab ay ku dileen gudaha Magaalada Cape Towan iyo daafaheeda islamarkaana arrintaasi ay wali ka arrinsanayaan Saraakiisha Ciidamada booliska ee dalkaasi. Sidoo kale Saraakiisha Ciidamada dalka Koofur Afrika ayaa sheegay inay ka hortagayaan dhibaatooyinka ka dhaca dalkaasi islamarkaana lagama maarmaan ay tahay in tallaabo laga qaado cid waliba oo qal qal galinaysa ammaanka dalkaasi. Arrintaani ayaa la aaminsan yahay in saameyn ballaaran ay ku yeellan doonto Soomaalida ku dhaqan dalkaasi, inkastoo iyaguba ay qaati ka taagan yihiin kooxo Koofur Afrikan ah oo dhibaato u gaysta.
Marka laga soo tago dilka la sheegay in loo gaystay dadka Ethiopian-ka ah, waxaa jira Muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed oo lagu la yahay dalka Koofur Afrika kuwaasi oo ay dileen sida la sheegay Kooxo burcad Koofur Afrikan ah, waxaana jirin illaa iyo iminka booliska dalkaasi tallaabo uu ka qaaday Kooxahasi.